सभामुख कृष्णबहादुर महरा « रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: सभामुख कृष्णबहादुर महरा
महरालाई जिल्ला अदालत काठमाण्डौ लगियो, डीएनए परीक्षण पनि गरिने
काठमाण्डौ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा पेश गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिएपछि अदालत पेश गरिएको हो ।
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने महिलाले उजुरी दिन डराइन
काठमाडौं, १५ असोज । सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिन भने इन्कार गरेकी छन् । संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत उनले आफूमाथि सभामुख महराले यौन दुर्व्यवहार गरेको
महराको नैतिकता ! संसदमा अब के हुन्छ ?
काठमाण्डौ । पदीय मर्यादा विर्सेपछि कसको के लाग्छ र ? त्यो पनि महिला हिंसा । अझ भनौँ बलात्कारकै प्रयास । त्यो पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले । हो यस्तै फन्दामा पर्नुभयो सभामुख
काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको विरोध गर्ने बहानाहरु पाइरहेको छ । कहिले गुठी विधेयक त कहिले संसदमा सभामुख र सरकारको गलत नियत ।
काठमाडौं, १४ असोज । संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका छन् । उनले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई आजै राजीनामा बुझाएका हुन् । उनले बुझाएको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ,‘हिजोदेखि विभिन्न
सभामुख महरा शीर्ष नेताको सम्पर्कमा, राजीनामा दिने संकेत
काठमाडौं,१४ असोज। बलत्कारको आरोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले घटनाबारे छानबिनका लागि सहज वातावरण बनाउन आफु तयार रहेको बताएका छन । अहिले महरा पार्टीका शिर्ष नेताहरुको निययित सल्लाहमा रहेकाले सम्भवत उनले
महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि महराले यसो भने ? (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं, १३ असोज । प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले आफूमाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारको आरोपको खण्डन गरेका छन्
महिलालाई दुव्र्यवहारको आरोपपछि सभामुख महरा तनाबमा, नेकपामा खैलाबैला
काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि एक महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र हलचल मच्चिएको । नेकपाबाट चुनाव लडेर दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका महरालाई
छ सदस्यीय टोली लिएर सभामुख महरा काजकिस्तानप्रस्थान्
काठमाडौं, ४ असोज । सभामुख कृष्णबहादुर महरा शनिबार काजकिस्तान गएका छन्। युरोसियन मुलुकका सभामुखहरू सहभागी हुने बैठकमा भाग लिन महरासहित नेपालबाट छ सदस्यीय टोली गएको छ। सेप्टेम्बर २२ देखि २५ सम्म काजकिस्तानको
संघीय संसदले खरिद गरेको गाडीमा कमजोरी देखियो
काठमाडौं, १७ भदौ । संघीय संसदले खरिद गरेको गाडीमा देखिएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्न गठित छानवीन समितिले सबै गाडीमा प्राविधिक कमजोरी भेटिएको स्पष्ट पारेको छ । संसदीय समितिका सभापतिहरुले चढ्ने गरेको
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई प्राकृतिक विपद प्रभावित क्षेत्रमा पुगी उद्धार र राहतमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार संघीय संसदको बैठक ९ दिनलाई स्थगित
काठमाडौं, १६ असार । सभामुख कृष्णबहादुर महराले विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिकेर संसदीय अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउन एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संसद सचिवालय र पूर्वसांसद मञ्चले ६१औं संसद